Ọgwụgwọ Banyere Gender Dysphoric Children - Dr R Kosky | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
-Mụaka nwere nsogbu nwoke na nwanyị: ọgwụgwọ inpati na-enyere aka? - Dr. Kosky.
NJIKWU EGO NA-AGBA NA AUSTRALIA Vol. 146 June 1, 1987
Childrenmụaka ndị nwere oke mmụọ: ihe gbasara ndị ọrịa anaghị anata enyemaka?
AKSTRKỌ usoro ọgwụgwọ ụmụaka maka nsogbu ahụ nwoke na nwanyị nwere nsogbu edoghị anya ugbu a. Akwukwo ogwu a na akowa umuaka ndi nwere akparamagwa nwoke na nwoke ka elebara ha anya n’ebe ndi umuaka no. Enyere nsonaazụ dị mkpirikpi na nyocha ogologo oge, nke na-egosi nsonaazụ dị mma n'ozuzu ya. Ihe nchoputa a nwere ike inwe ihe bara uru ma ihe omuma banyere ya n'ihi na ha na-enye echiche na enwere ike kpebie mmekorita nwoke na nwanyi site na mmekorita intrafamilial nke kwesiri ekwesi.
Ihe omumu ihe omumu banyere umuaka ndi nwere mmekorita nke nwoke na nwanyi, ma obu ndi na-achota nmekorita nke nwoke, na-egosi na otutu na etolite n'enweghi obi uto, na enweghi mmekorita nke mmekorita nwoke na nwoke, mmekorita nwoke na nwanyi, transvestitism na transsexuality. ':
Ọ bụ ezie na ihe ọmụma dị otú ahụ na-enye ihe gbara ọkpụrụkpụ maka ọgwụgwọ ọgwụgwọ n'oge, usoro nduzi maka ọgwụgwọ nke ụmụaka ndị akọ na-enwe nsogbu ka edobeghị anya. Green kọwara ụzọ agbakọrọ agbakọ nke metụtara ndụmọdụ nlekọta ahụike nke nwatakịrị na ndị nne na nna, mmughachi na mgbanwe omume.?: “Ekwuola ezigbo nsonaazụ maka ọgwụgwọ otu nke metụtara mmezi omume! Rekers et al. kọrọ banyere ọtụtụ usoro ndị e mere ka a gbanwee omume ha. ” 11 Psychoanalysis ”na kpụ ọkụ n'ọnụ psychotherapy na-iji dozie esemokwu gbasara nkewa ma ọ bụ ọrụ mmepe nke mmadụ n'otu n'otu ka akwadoro.” Karịsịa, nlekọta ndị dị otú ahụ enwebeghị ezigbo ihe ịga nke ọma. N'ime ikpe 138 a gwọrọ nke sitere n'aka akwụkwọ site n'aka Zucker, ikpe '97' nwere ụfọdụ data nsonaazụ post-pubertal dị. N'ime ndị a, naanị 25070 mepụtara dị ka nwoke na nwanyị. Pasent 6 nke ndị ọrịa bụ nwoke idina ụdị onwe na XNUMX% bụ transsexual ma ọ bụ transvestite, ndị ọzọ fọdụrụ na "ejighị n'aka nsonaazụ". N'agbanyeghị akụkọ na-agbanwe agbanwe nke mmekọrịta ezinụlọ na-emebi nke ọma na enweghị mmekọrịta mmekọrịta n'etiti ụmụaka ndị dị otú a, ka ọ dị ugbu a, enwebeghị akụkọ banyere iji ọgwụgwọ eme ihe dị ka ọgwụgwọ nọ n'ụlọ ọgwụ. Akụkọ a na-akọwa ụzọ dị otú a ma na-enye ozi gbasara mkpirikpi oge na nsonaazụ ya.
Ihe ndekọ ụlọ ọgwụ
N'agbata 1915 na 1980, umuaka isi ụlọ akwụkwọ praịmarị asatọ ka nwere akparamagwa nke nwoke na nwanyị ka etinyere aka na Ọrụ Ahụike Childmụaka na Ndị Ọdọ, Perth, Western Australia. Nwa nwatakịrị nwere ahụike na-enyocha ihe nwalere na-enyocha nwa ọ bụla; ụfọdụ nyochara m n'onwe m. Ewere njirimara ụlọ ọgwụ a na-akọwara ebe a site na ajụjụ ọnụ a na-ahụ maka ọrịa uche na ndetu na ahụike na nke nọọsụ. Achịkọtara isi ihe ndị dị na tebụl. Site n'okwu ntụgharị akparamagwa nwoke na nwanyị, m na-atụ aka na akparamagwa, mmetụta, omume na mmasị ndị ụmụaka gosipụtara dị ka ngosipụta nke nwoke na nwanyị. Omume ndị a gụnyere ijiri uwe a na-ahụ anya dị ka nke ndị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị na ije, na-ekwu okwu ma na-egwuri egwu n'ụzọ ndị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe.
Omume ndi nwoke na nwanyi abughi ihe ha mere na nwata ma obu ihe ndi ozo nke jikotara ya na ndi okenye nke nwoke; dịka ọmụmaatụ, nwatakịrị nwoke dị afọ itoolu na-eyi akwa akpụkpọ ụkwụ dị elu, sọks, ọla na mma. Omume ndị nwoke na nwanyị nwere mmekọrịta dị iche iche na-eme ụfọdụ oge, dị ka ịnọdụ n'ihu enyo na itinye mmezi ọtụtụ awa na njedebe. Ọrụ ndị dị otú ahụ gbochiri ọrụ na ọdịmma dị iche iche nke ụmụaka ndị ọzọ bụ. Deniedmụaka gọnahụrụ mmekọrịta nwoke na nwanyị ma ọ bụ nke pere mpe. Otu nwanyị na-arịa ọrịa gọnahụrụ mmekọahụ ya wee gosi iwe na njirimara nwoke na nwanyị nke ya. Ndị ọzọ enwechaghị akara, mana ha niile kwuru na ha chọrọ ịbụ onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha na ọ masịghị akụkụ ahụ ha. Otu nwa nwoke nọdụrụ ala micturate. Ndị edemede ndị ọzọ enyewo nkọwa yiri nke ahụ gbasara omume nwoke na nwanyị, 0. ' na njirisi maka nhazi ọkwa nke njirimara nwoke na nwata na Ihe nyocha na ntughari uche nke nsogbu uche Mpempe akwụkwọ nke 3rd. B.. 10
Achọpụtaghị obi ụtọ ụmụaka ndị a gbara na ajụjụ ọnụ ọgụgụ isi mbụ. E kwuru na ụfọdụ nwere echiche igbu onwe ha. Onye ọ bụla kwupụtara mwute na owu ọmụma. Ha niile nwere ọgụgụ isi ma ọ bụ karịa karịa ọgụgụ isi ma ọ bụ enweghị nrụrụ anụ ahụ. Enweghị ihe akaebe nke psychosis. Ndị mụrụ ha enweghị obi ụtọ, ọkachasị nne ma ọ bụ nwanyị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya nke yiri ka ya na ezinụlọ ya nọ, owu na-ama ya, yana obere ụlọ ọrụ mmekọrịta. Nne ma ọ bụ nna a na-akọwakarị mmekọrịta chiri anya dị n'etiti onwe ha na nwa ahụ. Nne ma ọ bụ nwanyị ahụ na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya anọghị n'ụlọ, nọrọ ogologo oge, ma ọ bụ rụọ ọrụ gabiga ókè ọtụtụ awa. Ọtụtụ mgbe, nne na nna ochie na-abụkarị ndị na-achịkwa ezinụlọ. N'izugbe, ejiji obe bidoro mgbe nwatakịrị ka dị obere, ọ na-abụkarị ihe dị ka afọ abụọ.
Nne ma ọ bụ nwanyị na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya nwere ike ibido nke a dị ka "egwuregwu" ("Ọ bụ na ọ (ma ọ bụ) ọ mara mma n'anya?")), Na, na obi ụtọ, chọpụtara na, mgbe nwatakịrị ahụ yi uwe nke onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya, egwuri egwu di egwu. Nwatakịrị mechara jiri ejiji nke aka ya. Nne na nna a na nwatakịrị ahụ mere ihe ole na ole n'èzí ụlọ. Imirikiti ụmụaka ahụ agabeghị ụlọ akwụkwọ ọta akara na ọjụjụ ụlọ akwụkwọ emeela n'ọtụtụ oge. Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, a na-ahụta omume nwata nwoke na nwanyị na nwanyị na ụmụaka ndị ọzọ. Ndị nne na nna ahụ ghọtara na nwa ha enwebeghị ike ịzụlite mmekọrịta ndị ọgbọ na-eto eto ma ọ bụ mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze na enweghị enyi na enweghị obi ụtọ. Nnyocha nke akparamàgwà mmadụ, gụnyere “Nnwale Onye Ọ Bụla” na Akara Akara Maka Childrenmụaka ”” gosipụtara na nchọta ahụike ụmụntakịrị a gọrọ ma ọ bụ jụ mmekọahụ mmekọrịta ha na nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya.
David (a pseudonym), bụ onye dị afọ isii (IQ = 122), jụrụ ịga ụlọ akwụkwọ ọ gwụla ma ọ bụrụ na ọ yi uwe ụmụ nwanyị. Mgbe o rutere ụlọ akwụkwọ, mgbe nne ya kwechara ihe ọ chọrọ, ụmụaka ndị ọzọ lelịrị ya anya. Ọ bụ onye enweghị enyi, onye owu na-ama na enweghị obi ụtọ, belụsọ mgbe ya na nne ya na-egwu “uwe-uwe”. Nna ya bụ onye na-anya gwongworo ma na-anọghị n'ụlọ ruo ogologo oge; nne ya bụ nwanyị ihere, onye na-ekwu okwu ihere na-enwechaghị onye ọ maara. Nwanne nwoke na nwanne Devid tọrọ ya nke ukwuu. Eka David ama oyom eyenan̄wan efen.
Mgbe a mụsịrị Devid ọ dara mbà n'obi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ wee chee na ọ bụ "ọbịa". Mgbe ọ gbara ihe dị ka ọnwa iri na asatọ, nwanyị ahụ yiwe ya akwa ochie nke nwa ya nwanyị, nke ọ dowere. Obi dị ya ụtọ na nke a, "ọ bụ egwuregwu, n'ezie", ya mere, ọ gara n'ihu na-eme ka ọchịchọ ahụ wee hụ na ya na David na-egwuri egwu ngwa ngwa n'oge "ejiji". N’oge na-adịghị anya, Devid yiiri uwe nwanne ya nwaanyị wee were ọla nne ya mere mma. Ọ na-aga ụlọ akwụkwọ ọta akara mgbe ụfọdụ. Mgbe o mere ya, ọ gara ozugbo maka igbe "ejiji" wee nọrọ ebe ahụ na-egwu naanị ya. Omume dị otú ahụ ekweghị omume n'ụlọ akwụkwọ, nne David wee mata ngwa ngwa na ya nọpụrụ iche na enweghị ike iso ụmụaka ndị ọzọ na-akpakọrịta.
Reginald (a pseudonym) dị afọ asaa (IQ = 105) .Ọ bụ nwa nwute na-enweghị obi ụtọ ma chee echiche nke ukwuu banyere igbu onwe ya. Uwe ụmụ agbọghọ na-amasị ya kemgbe ọ dị afọ abụọ, mgbe 'uwe nwanyị nwanne ya nwanyị tọrọ ya' nwere mmasị. Ọ họọrọ iso ụmụ agbọghọ na-egwuri egwu, mana ọ na-enwekarị mmasị ịnọnyere nne ya. O gosipụtara ọchịchọ siri ike ọ ga-abụ nwanyị ma họọrọ ịnọdụ ala iji micturate. Dị ka ọ na-adịkarị, ọ na-enwe obi iru ala ma na-ewepụ ọnọdụ ọ bụla ọ bụla, mana mgbe ọ na-eyi uwe dịka nwa agbọghọ ọ gosipụtara, na-emetụta omume "girlish". Themụaka ụlọ akwụkwọ leghaara ya anya ma ndị nkuzi kọọrọ na ọ nwere ike ịnagide naanị n'otu ọnọdụ n'otu ọnọdụ. Reginald emeghị atụmatụ ma mụọ mgbe alụmdi na nwunye nke ndị mụrụ ya enweghị afọ ojuju.
Nne ya gwara anyi na site na mgbe Reginald amuru ya “na-akpari ya” ma “na-achi” nwanne ya nwanyi nke okenye nke na-ekwukar i “oburu na ya bu nwa agbogho.” Otu o sila di, mgbe emechara nlebara anya banyere ezinulo ahu e chere na nne na-etinye uche ya n'ime nkọwa ya banyere akparama agwa nwa ya nwanyị. Mama Reginald bụ nwanyị owu na-ama. Di ya na-etinye oge dị ukwuu na-arụ ọrụ ma ọ bụ "na-eso ụmụ nwoke", ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ na-enweghị isi, ọ dị ka nwoke enweghị ntụkwasị obi nke nne ya na-achịkwa. Ma ya na nwunye ya hụrụ ibe ha n'anya, mana ha eto eto ma tụọ ụjọ na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ha (emesịa ha ritere uru na ọgwụgwọ mmekọahụ).
Kevin (a pseudonym) bụ nwata nwoke dị afọ asatọ (lQ = 120) bụ onye siri ọnwụ na ọ ga-eyi uwe ụmụ nwanyị kemgbe ọ dị ihe dị ka afọ abụọ. Enwere nnukwu nsogbu mgbe amụrụ Iris n'ihi na nne ya mepụtara psychosis na-amụ nwa. Kevin tara ahụhụ ụfọdụ na-asọ oyi ma na-emerụ ahụ n'oge ahụ. N'otu oge, ọ dụtụrụ anụ ahụ n'akụkụ mkpịsị aka ya. Mgbe ọnwa 18 gachara, mgbe ọ gbakere, nne ya nwere nchegbu gbasara Kevin ma nwee obi amamikpe. N'oge a, mgbe ọ na-eyi uwe dịka nwa agbọghọ, ya na ya nwere ike igwuri egwu. Nna ya etinyeghị aka na ya, hapụ ezinụlọ mgbe Kevin dị afọ anọ, ọ hụghịkwa ịhụ nwa ya nwoke. Mgbe nsogbu ego gasịrị, nne Kevin mechara nweta nkwụsi ike. Kaosinadị, omume Kevin abụrụla ya ihe ihere n’ụlọ akwụkwọ na n’ụlọ. O kwuru na "oge ọ bụla e nwere nwoke gburugburu, ọ [Kevin] na-emegharị bum ya". Kevin bụ nwa na-apụ apụ, na-enweghị obi ụtọ, na-eme nwanne ya nwanyị enyi, na-enweghị enyi, onye na-eme ihe na-adịghị mma n'ụlọ akwụkwọ, ma na-eyi uwe mgbe ọ bụla o nwere ike.
Dorothy (nke a na-akpọghị aha ya) dị afọ 10 (IQ, nke kachasị elu) mgbe akpọrọ ya n'ihi ịkwa ákwá, enweghị obi ụtọ, mkpesa nke mgbu na ihe mgbu na-enweghị ihe kpatara ya, na ịjụ ụlọ akwụkwọ. Ọ jụrụ iyi uwe ụmụ akwụkwọ ụmụ nwanyị ma yie naanị nwoke. N'ụlọ akwụkwọ ọ leghaara ụmụ agbọghọ anya, ọ ga-achọkwa iso ụmụ nwoke na-akpakọrịta, nke ọma. Ọ bụ ezie na ọ na-enwu gbaa, o zere ndị nkuzi nwanyị ma jụ ịmụ ihe n'aka ha, si otú a na-akpata nsogbu agụmakwụkwọ. O nwere nkwenye siri ike na ọ bụ nwanyị, ọ na-agụsikwa agụụ ike ịghọ nwa nwoke.
Ndị mụrụ ya kewara afọ abụọ tupu mgbe ahụ. Nwanne ya nwoke na nwanne ya nwoke binyeere nna ya, ebe Dorothy na nne ya. Nne ya jụrụ Dorothy iso nna ya biri n'ihi '' mmetụta '' ya. Ọ na-achọ Dorothy ka ọ bụrụ nwa nwoke, ọ na-emeso ya dị ka otu ma kpọọ ya "Rocky". Nna Dorothy mere mgbalị ole na ole maka ezinụlọ ya, ma e wezụga Dorothy. Nna ya buru ụzọ zụta uwe nwoke maka uwe Dorothy ma ọ bụ egwuregwu nwoke maka onyinye ụbọchị ọmụmụ. Papa Dorothy so ya gaa ụlọ ọgwụ. Dorothy yi uwe bọọlụ, tinyere bọọlụ bọọlụ, na-agba bọọlụ nke nna ya nyere ya nso nso a.
Ndị ọrịa 5 (lQ = 107), 6 (lQ = 106), 7 (lQ = 120) na 8 (IQ = 112) bụ ụmụ nwoke anọ, ndị agadi 10 ruo 12 afọ. A chịkọtara atụmatụ ụlọ ọrụ ha na Table. Ejiri uwe ejiji nke ọ bụla na nke ọ bụla enweghị obi ụtọ, ọkpara kachasị na-egbu onwe ya n'oge a nabatara ya n'ụlọ ọgwụ. Nke ọ bụla bụ nne ha na-achị, ọ nweghịkwa nkwado nna ha nyere ha.
Na oge 6, 7 na 8, ndị nne agbaala ụmụ ume ume ka ha nwee mmasị na uwe ụmụ nwanyị, ihe ịchọ mma na ihe ịchọ mma. Ọ dịghị nke ọ bụla n'ime ụmụaka ndị a nwere ndị enyi, ha niile na-enwekwa ọganihu na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ. Site na akụkọ akụkọ ndị a, ọ bịara doo anya na ọ bụghị nanị ụdị mmekọrịta nwoke na nwanyị nwere, ọ bụ naanị nsogbu kacha emetụta ụmụaka. Obi erughị ala, nchekasị, echiche igbu onwe ya, iwe ike na ọdịda ịmụtacha nke ọma n'ụlọ akwụkwọ bụ ihe dị ọtụtụ. Dịka ọ dị n'ụdị akparamagwa nwoke na nwanyị, ihe ndị a pụtara na ha dị elu na mmekọrịta ụmụ na-azụ ụmụ.
Usoro ihe mgbaru ọsọ na ọgwụgwọ:
Nsogbu dị mkpa n'okwu ndị a bụ enweghị ike nke nne ma ọ bụ nna na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya ịnabata nwa ahụ, belụsọ na ndabere ọnọdụ nwa ahụ mezuru ụfọdụ mkpa ha. Mkpakọrịta nke nne na nna ahụ chọrọ n'aka nwa ya, na-enweghị nchekasị nke e kere na ha site na esemokwu nwoke na nwanyị. Nne ma ọ bụ nna ya, iji kwụsị nchegbu ya, wepụtara echiche efu banyere nwa ahụ. Ya ma obu nwanyi ghotara mmeko nwoke na nwanyi, ma gbaa ha ume banyere akparama agwa nwoke na nwanyi. Mgbe nwatakịrị ahụ nakweere omume ndị a, nne ma ọ bụ nna ya gbanwere site na mmekọrịta oyi na igwe, ya na nwa ahụ ka ọ nwee ịhụnanya na ịhụnanya. N'ọnọdụ ole na ole, ọjụjụ a jụrụ nwatakịrị ahụ mere na mmalite afọ, naanị iji kwụọ ụgwọ maka mgbe "alaghachiri" nwatakịrị ahụ n'uwe nke onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ya. Dị ka o kwesịrị ịdị, nwatakịrị ahụ chọrọ ịnọgide na-enwe na ịgbatị mmekọrịta ọhụrụ ahụ, ya mere, n'amaghị ama, nakweere omume ndị achọrọ ya. Mmekọrịta mmekọrịta dị otú a dị n'etiti nne na nna na nwatakịrị, ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume igbo mkpa mmetụta uche nke nne na nna, abụghị nke nwere ike ịkwado ntozu oke nke nwatakịrị, ọkachasị ebe ọ bụ na ekwetaghị ohere iji "na-akpachi anya" na ụmụaka ndị ọzọ na omume ndị na-eme ka nwa ahụ pụọ ndị ọgbọ ya. Ma nne ma nna ma nwatakịrị, mmekọrịta na-enyere ibe ha aka gbochiri mmepe nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-eme ka ịdabere na dyadic dị ike. Nne ma ọ bụ nna ahụ lekwasịrị anya na nwa ahụ n'ihi na ndụ ha enweghị afọ ojuju, na usoro nke mmekọrịta ha na ọha.
Nne na nna nke otu nwoke ahụ dara ogbenye na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mana zere nchekasị nke mmekọrịta nke di na nwunye site na ịchọta nkasi obi na ọrụ, enweghị ụlọ, ma ọ bụ nkewa. Ọganihu n'ime mmekọrịta nne na nna na nwa nwere ike ime naanị ma ọ bụrụ na ndị nne na nna meziwanye mmekọrịta ha na mmekọrịta ha, zụlite mmekọrịta alụmdi na nwunye na-enye afọ ojuju karị, wee chọta ụzọ dịgasị iche iche nke mmekọrịta ọha na eze. Umuaka a choro ka ha nwekwuo ikike nke ndi mmadu, iji meziwanye obi ike ha site n'inwe mmekorita na mmekorita nke ndi mmadu kwesiri ka ha mezie ya, na ịzụlite ihe omume na ihe omume iji kwe ka ndi mmadu puru iche tozuru oke, Iji gboo mkpa ndi a, agbamume na obi uto nkwado nke ndị mụrụ ha ga-adị mkpa. Ndị nne na nna ga-anabata nwa ha maka àgwà pụrụ iche nke ya, ma gosipụta nke a na-egwuri egwu, egwuregwu kwesịrị ekwesị na nwatakịrị ahụ. Nhọrọ nke ọgwụgwọ inpeta kpebisiri ike site na ọnọdụ nke nsogbu bụ isi na mmekọrịta ezinụlọ yana amaghị, mana mmetụta nke ndị nne na nna. Na mgbakwunye, mkpa ọ dị ịzụlite mmekọrịta ọha na eze ka o wee nwee ndị enyi na ịkọba akụ na mpụga ụlọ yiri ka ọ dị mkpa. Echere na enwere ike igboju nwatakịrị ahụ mkpa ya site na itinye ụbọchị ọ bụla na usoro ọgwụgwọ nke ndị ọrụ nlekọta ahụike na-enye ;! ọ bụ ezie na ndị nne na nna nwere ike ịkwagide n'oge oge nleta ha yana site na nhọpụta pụrụ iche nke ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na ndị na-elekọta mmadụ.
Site na ikike nne na nna ha, a nabatara ụmụaka ahụ n'ụlọ ọgwụ Stubbs Terrace, ngalaba na-enye obere ikike maka ụmụaka, n'oge dịgasị iche n'etiti 1975 na 1980. Naanị otu nwatakịrị nwoke na nwanyị nwere nsogbu nọ na ngalaba ahụ n'oge ọ bụla. Othermụaka ndị ọzọ nọ na ngalaba ahụ nwere nsogbu dịgasị iche iche gụnyere ọrịa neurotic (ịda mba, nchekasị, mmegharị ntụgharị, mkpali, na ihe ndị ọzọ), nsogbu psychosomatic (anorexia nervosa, eczema, asthma), mmezi mmeghachi omume ma ọ bụ mmeghachi omume nke ọrịa na-adịghị ala ala. Ọ dịghị onye ọ bụla nwere omume aghụghọ ma ọ bụ nkwarụ ọgụgụ isi. Ọtụtụ n'ime ha zuru oke ịga ụlọ akwụkwọ praịmarị nke obodo kwa ụbọchị ma ha sonyere n'ọtụtụ egwuregwu. N'ụlọ akwụkwọ na n'ụlọ ọgwụ, a gbara ụmụaka niile ume ka ha na ụmụaka ndị ọzọ na-egwu egwuregwu. Emere ọtụtụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ na nwa ahụ họọrọ ihe masịrị ya. Ọ dịghị onye ọ bụla gbalịrị ime iji gbaa ụmụ nwoke ma ọ bụ nwanyị ume ka ha na-akpa àgwà. Nanị mmachi a machibidoro ụmụ nwoke iyi uwe elu bụ na ha ga-asọpụrụ nzuzo nke ndị ọzọ, n'ihi ya kwa, ha ekwesịghị izuru uwe ụmụ nwanyị.
Omume ndị tozuru etozu gbara ndị ọrụ nọọsụ ume ka ha dochie echiche a na-ezighi ezi ma na-ewepụ akparamàgwà nwoke na nwanyị. A gbara ụmụaka ume ka ha hapụ ime ụlọ ha wee sonyere n'egwuregwu. Ejiri nkwalite nke ọnọdụ ọhụrụ na-ebilite na ngalaba ahụ kwalite nkwenye na ùgwù onwe onye site na ịmezu ọrụ ma ọ bụ mmemme na-enweghị isi dị ka tenis, ịgbagharị ma ọ bụ ịwụ elu, yana site na ịme ụmụaka enyi. Ndị nne na nna, ya na ndị ezi-na-ụlọ ha ndị ọzọ, na-aga eleta oge nile, ma n’oge ndị a, a gbara ha niile ume isonye na mmemme na isoro ụmụaka egwu. Childrenmụaka lara ụlọ ụfọdụ nke ngwụsị izu, hie ụra n'ụlọ otu abalị. Ndị nne na nna hụrụ ma ọ bụ dibia mgbaka ma ọ bụ onye na-elekọta mmadụ otu ugboro n'izu, yana ndị ọrụ nọọsụ ndị edenyere aha ha maka nleta ha, iji tụlee ọganihu nwa ha na mmekọrịta alụmdi na nwunye ha. Enyere ha ndụmọdụ banyere otu esi azaghachi nwa ha na otu esi emeziwanye mmekọrịta ha na ọha.
Nsonaazụ obere oge
Uwe ejiji Cross kwụsịrị ngwa ngwa mgbe a nabatachara n'ụlọ ọgwụ. Ọtụtụ n'ime ụmụ nwanyị ndị ọzọ na-emekọ ihe n'ụzọ ọzọ, ndị nọrọ kemgbe ọtụtụ afọ, pụrụ n'anya mgbe ọtụtụ izu gachara. Utọ ukpụhọde oro ke ido nditọ emi ama anam mme ete ye eka ẹkop ndịk. Nne nke Ndidi 6 nwere ụjọ. N'ihi nke a, nwa ya nwoke laghachiri n'uwe ejiji, yi ọla, ihe na-esi isi ụtọ, were gabazie, wee biri. Mgbe ọ kwụsịrị ịkpụgharị uwe, ọ malitere imebi omume ahụ site n'iwetara ya uwe nwanyị ma kewapụrụ onwe ya na ya n'ime ụlọ ya. N'agbanyeghị mbọ anyị gbara, ọ kpọpụrụ nwa ya nwoke ụlọọgwụ. Anyị na nwata ahụ enwekwaghị. Sevenmụaka ndị ọzọ asaa nọrọ dị ka ndị ọrịa na-agwọ n'agbata izu 10 na 23 (nkezi, izu 18). Na mkpokọta., Ndị ọrụ nọọsụ na ndị ụlọọgwụ kwuru na mmelite dị mma na ọnọdụ nke nwatakịrị ahụ mgbe ọ nabatachara ụlọ ọgwụ, n'agbanyeghị na ndị ọrụ ahụ kwuru ihe ngosi nke nhụjuanya na iwe ruo ọtụtụ izu. Mmezu nke ụlọ akwụkwọ na omume mmekọrịta mmadụ na-akawanye mma n'oge oge ọgwụgwọ ọrịa, yana, site na oge ịhapụ ụlọ ọgwụ, ụmụaka na-arụ ọrụ mmekọrịta ọha na eze na agụmakwụkwọ dịka ihe ruru ogo afọ.
Ndi nne na nna gosiputara odi njikere ha gbanwere. Ebe mgbanwe nwatakịrị ahụ ga - eme ngwa ngwa, ma gbakọta ọnụ n'oge, anyị chọpụtara na nna ahụ gbara mbọ pụrụ iche ka ya na nwatakịrị ahụ na ndị ezinụlọ nọkọọ, dịka ọmụmaatụ, site n'ịgbanwe oge ọrụ ya ka ya na ezinụlọ nwee ike ịnọ ọtụtụ oge. O juru ọtụtụ ndị nne na nna obi ụtọ mgbe ha na nwatakịrị ahụ na-anọrị n’oge nleta ha. Agbanyeghi na mbu lara, ha sonye na mmemme na egwuregwu mgbe ndi otu oru gbara ha ume ma duzie ha, ndi choro ka ha gosi ndi ezi na ulo ka ha gha egwu egwu. Ozugbo ndị nne na nna malitere ịnọnyere nwa ha, mkpali ha maka mgbanwe gbanwere ngwa ngwa. Mgbe ụfọdụ nne nne ochie na-anwa ime ka nwatakịrị ahụ laghachi ịkwa akwa. Umu nne nne abuo webatara akwa umu nwanyi maka umu aka ha. Ihe ndị a kpatara esemokwu n'etiti nne na nna ochie na nne na nna, ebe ndị nke ochie gbahapụrụ.
Nsonaazụ otu afọ:
Themụ asaa ndị mechara dechara usoro ọgwụgwọ ahụ ka dibia na-agwọ ọrịa na-ahụ ha oge niile n'ụlọ ọgwụ ndị ọrịa maka ịgbadochi. Otu afọ mgbe a gbasịrị n'ụlọ ọgwụ, edekọtara ụmụaka ahụ niile ka ha na ndị ọzọ na-emekọ ihe nke ọma n'ụlọ akwụkwọ, achọpụtawo na ha nwere obi ụtọ. Akụkọ ụlọ akwụkwọ na-adịkarị mma. Appearedmụaka ahụ gosipụtara na ha nọgidere na-enwe afọ ojuju kwesịrị ekwesị nke etinyere n'oge ọnụnọ ha na-arịa ma na-aga n'ihu na-etolite n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Egosiwo obi ike ha na ikike mastery ha, nke toro mgbe ha nọ n’ụlọ ọgwụ, n'agbanyeghị arụrụala ụlọ akwụkwọ na ebe obibi. N’otu oge (Ọnọdụ 1) ịbịaghachi na omume na nha nwoke na nwanyị. Nwata a bidoro imewe akwa mgbe ọtụtụ ọnwa gachara n'ụlọ ọgwụ. Nna ya alọghachila ịrụ ọrụ ọtụtụ awa ma ghara ịnọ n'ụlọ ọzọ ogologo oge. Nkpọrọ ahụ kpọgara nwata ahụ izu abụọ. Nna ya gosipụtara na ya adịghị anakwere alụm di na nwunye ahụ. Mkparịta ụka ezinụlọ na-esochi, mgbanwe dị iche iche, wee kwụsị ịkpa uwe kwụsịrị.
N'oge nkwadebe nke akụkọ a (Disemba 1986), ụmụaka asaa ahụ gụchara usoro ọgwụgwọ ahụ nke ọma gụrụ agadi dị ka ndị a: otu nwa dị afọ iri abụọ na otu; twomụaka abụọ dị afọ iri na itoolu; Otu nwa gbara afọ iri na asatọ, otu nwata dị afọ iri na isii; Otu nwa gbara afọ iri na ise; na otu nwa dị afọ iri na atọ. Ogologo oge gafere kemgbe ịbanye n'ụlọ ọgwụ bụ afọ asatọ (nso, isii ruo afọ II). Onye ọkachamara na-elekọta ezinụlọ niile site n'aka onye ọkachamara ma ọ bụ ụlọ ọgwụ. Otu ezinụlọ kwagara n'etiti obodo ma kpọtụrụ ndị na-adịbeghị anya site na ekwentị. Enwetara ozi n’ajụjụ ọnụ a na-ahazighị emebe ụmụaka na nne na nna ya, yana site na nyocha akwụkwọ akụkọ ụlọ akwụkwọ. Otu nwa okorobịa degharịrị aha ya mgbe ọ dị afọ iri na asaa n'ihi na ọ 'gwakọtara' ya banyere mmekọahụ. Ọ nọ na-edina ụdị onwe ya kemgbe ọ dị afọ 21. Kaosiladị, ọ kwenyeghị na ya bụ nwoke idina nwoke n'ezie, mana ọ kọwara na ya kwenyere na "nne ya hiwere ya idina ụdị onwe". Ọ chọrọ inyocha mgbagwoju anya ya na ụjọ ọ na-atụ gbasara ụmụ nwanyị tupu ọ gbalịa ịkọwa ha na mmekọahụ. O nweelarị ezigbo ọrụ na ejiji ụmụ nwanyị. Ka ọ na-erule afọ 19 ọ lere onwe ya anya dị ka nwoke na nwoke na nwanyị, ma ya na nwanyị enwebeghị mmekọahụ. Ọ dịghị nke ọ bụla n’ime ụmụaka ndị ọzọ, ndị toro eto ugbu a, kwupụtara mmetụta nke idina ụdị onwe, bụ transvestite, ma ọ bụ transsexual. Ha nile emewo nke ọma n'ụzọ ezi uche dị na ha n'ụlọ akwụkwọ ma nwee ezi mmekọrịta ha na ụmụaka nke ma ndị nwoke ma ndị nwanyị. Ihe niile ka dị mma
ọdịmma. Nne nke Patient 5 kọọrọ na nwa ya nwoke yi uwe maka “izu ole na ole” na mmalite oge uto ya. Somefọdụ na-enweghị nchịkwa na-emetụta ọrịa. Otu nwata nwoke (ikpe 1), gbara afọ iri na ise, gwara anyị na nne ya gwara ya n'oge na-adịbeghị anya ka ọ zụta tiketi maka ha ịga mmemme ịgba egwu abalị abalị, arịrịọ, ka o kwuru, nke mere ka ọ nwee "ụjọ".
Enwere ike ịkatọ akụkọ a n'ọtụtụ ọkwa. Nlele ahụ pere mpe, ma ahọpụtara ya site n’ịrịka maka ọrụ gọọmentị. N'ihi na ntụgharị aka ahụ mere ihe karịrị afọ ise, yana n'ihi oge sochirinụ gbadara ruo afọ 11, akụkọ ahụ na-enye nkọwa azụ ma ọ bụghị ngwaahịa nke nnwale. A na - ekwu na nkatọ dị otú ahụ na nyocha ndị gara aga banyere ọgwụgwọ na nsonaazụ a kọrọ na akwụkwọ ahụ ma Zucker chịkọtara.
Site na iru eru a, usoro a kọwara na akụkọ a gosipụtara ihe ịga nke ọma ikwe ka ọtụtụ ụmụaka mee ihe iji nwepu obi iru ala mbụ ha na itozu oke na afọ ojuju dịka mmadụ nwere onwe ya na mmekọahụ. Ọgwụgwọ ahụ wetara mmelite ozugbo na nsọpụrụ onwe onye yana ịrụ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, akụkụ ndị a yiri ka ọ kwadoro kemgbe ọtụtụ afọ. N'ezie, n'ajụjụ ọnụ a na-esote na-esote, ndị ọrịa nwere ike ịbụ na ha na-achọsi ike ịmanye ndị dọkịta ha site n'imesi ọdịmma ha ike, ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ na ha na-ala azụ n'ịgwa ndị mmadụ ihe ha chere na a ga-emeso ha dị ka ihe na-adịghị mma. Ọchịchọ agụụ mmekọahụ nke ụmụaka asaa ahụ gụchara mmemme ahụ, mgbe "toro", amabeghị ha n'okwu anọ, ụmụ nwoke abụọ (Ikpe 1 na 8) bụ nwoke na nwanyị, otu nwa nwoke (Ikpe 7) bụ "agwakọtara". Agbanyeghị, ụmụaka ahụ niile mara mma nke ukwuu na ọkwa mmekọrịta nke na-arụ ọrụ.
Udi nsogbu di na nmekorita nke ezinulo nke edeputara nebea, karisiri nmekorita nke nmekorita ya na nne na nna nke onye ozo, ya na ndi nke nwoke na ndi nwoke na ndi nwoke na ndi nwanyi na-echeta. ” na-amụ banyere mmepe nke njirimara nwoke na nwanyị, ịkpachara anya dị mkpa na extrapolation nke nyocha ahụike site na obere ihe atụ nke ụmụaka nwere nsogbu ụmụ nwoke na mbọ iji ghọta mmepe mmekọrịta nwoke na nwanyị. Ọ bụ ihe ijuanya na etu ụmụ nwanyị n'omume anyị si kwụsị nnupụisi nke nwoke na nwanyị ozugbo ha hapụrụ ụlọ ha. Mgbe nke ahụ gasịrị, ụmụaka gosipụtara omume afọ na omume nwoke na nwanyị. Mgbanwe dị otú ahụ na mberede na-enye echiche na akparamàgwà ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ka etolitere gburugburu ebe obibi na ọkwa nke amabeghị na mbụ. N'aka nke ọzọ, usoro ndị na-emetụta mmepe nke agwa nwoke na nwanyị nwere ike ọ gaghị abụ otu ihe ahụ na-ebute mmepe mmekọrịta nwoke na nwanyị. Nkọwa nke mmekọrịta ezighi ezi nke ezinụlọ nwere ike ime ka aetiology nke omume ndị ahụ na-adịghị mma pụta ìhè, mana mmepe mmekọrịta mmekọrịta nwoke na nwanyị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, ihe ndị metụtara ndụ na-emetụta ya.
Ọdịiche ndị dị otú a nwere ike ịdị mkpa, ebe ndị ọzọ kwusiri ike na ntinye nke ihe ndị metụtara ndụ ma ọ bụ usoro iwu na mmepe nke nsogbu nwoke na nwanyị. ”:” Dịka ọmụmaatụ, na-adabere na nyocha ntụnyere dị n'etiti nne na nna nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-abụghị ụmụ nwanyị, nke dara gosiputara ihe di iche na etiti agwa ha na nmekorita ha, Zuger kwubiri na “oke omume bu ihe omumu banyere umu aka ha”. Nkwubi okwu a di ka ihe megidere ihe m choputara. Nkọwa gabigara ókè banyere usoro ọmụmụ ihe ọmụmụ banyere ọrịa ụmụ nwoke nwekwara ike iduga na enweghị ọgwụgwọ. Ndị ọkachamara ndị ọzọ dụrụ ụfọdụ ndị nne na nna isiokwu nke akụkọ a ndụmọdụ na "enweghị olileanya", ma ọ bụ na nwa ha ga-etolite "transsexual" ma ọ bụ "nwoke idina nwoke" ma ọ bụ, n'otu oge, nwa ahụ "ga-eme ga-aga New York nwere mmeko nwoke na nwoke na nwanyi inwe mmeko nwoke na nwoke ”.
Omume dị otú a, nke na-emesi omume nwoke na nwanyị ike dị ka ihe bụ isi ma ọ bụ naanị nsogbu, ma ọ bụ nke na-agbasi mbọ ike, na-agọnarị enweghị nwatakịrị ahụ na ọchịchọ nke nne na nna ịgbanwe. Ndụmọdụ ndị dabeere n'echiche ndị dị otú ahụ adịghị enye nhọrọ ndị ga-eme ka ndụ ndị mụrụ ụmụ na nke ụmụ ha tọkwuo ụtọ. Inpatient ọgwụgwọ bụ otu ndị dị otú ahụ nhọrọ.
Treatmentgwọ omume akparamagwa nwoke na nwanyị site na usoro ọgwụgwọ inpatient yiri ka ọ dị irè. Nyocha ụlọ nyocha ogologo oge na-egosi na enwere ike idozi mgbanwe mbụ. Nsonaazụ ndị a nwere ike idozi ụfọdụ echiche adịgboroja gara aga banyere nsonazụ. Agbanyeghị, akaebe. banyere usoro sistemu na ebumnuche ga - enyere mmadụ aka inwe echiche ziri ezi maka nsonaazụ ahụ adịghị, yana ihe nlele ahụ pere mpe. Nchoputa ozo banyere uzo ogwu di na mpaghara a ya na ezi na ulo ichoghi anaghi acho. Ọ ga-adị mkpa ịmalite ọmụmụ ihe ndị a na nnukwu ebe ndị mmadụ bi, ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ ụmụaka na-emezu usoro nchọpụta ahụ dị ole na ole. Na agbanyeghị, mmesi ike banyere ọnọdụ ezinaụlọ na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nyere na akụkọ a kwesịrị ịkwụsị imesi echiche ike na akparamagwa ndị onwe ha. Akparamagwa nwoke na nwanyị ka o mere ka ngosiputa nke nmekorita onwe onye di nma na ezughi oke nke mmekorita ya na ndi nne na nna ya na umu aka. Gbado anya na usoro ihe omimi nwere ike ikpughe ọtụtụ ihe banyere ezinụlọ ndị a, mana ọ nwere ike ọ bụchaghị na-enyocha usoro mmepe mmekọrịta akparamagwa nkịtị.
NA-AK :ZI: Njirimara nyocha ya na ọganihu
Afọ na Mmekọahụ
Akparamagwa nwoke na nwanyi
Nsogbu ndi ozo
Ogologo Ọgwụgwọ. (Izu
Soro n’otu afọ
Afọ ikpeazụ hụrụ. (Afọ)
Afọ Nwoke 6 Uwe uwe nne na nwanne Uslọ Akwụkwọ Ọjụjụ
Enuresis 13 Enweghị Omume Ego Okike 16 Enweghị omume Cross-Gender. Nwoke Amatara. Hetero-agụụ mmekọahụ agụụ mmekọahụ
Afọ Nwoke 7 Na-egosiputa ịbụ nwanyị. Uwe eji akwa. Na-egwu naanị ụmụ agbọghọ Reflọ akwụkwọ jụrụ. Enuresis 10 Onweghi nmekorita nwoke na nwoke. Ndị nne na nna na-anata ọgwụgwọ mmekọahụ. 12 "Ezi okwu", nwere "agbago" na "agbada" na ọnọdụ. Ọ gbasara ma nwoke ma nwanyị. Achọghị ihe banyere mmụọ. Alụmdi na nwunye ndị nne na nna "dị ukwuu"
Afọ Nwoke 8 Ebubata. Uwe eji akwa. "Sedu ike" nye ụmụ nwoke. Omume. Enweghị enyi. Obi anaghị adị gị mma. Onye iwe iwe. Terrojọ abalị. 17 Enweghị omume mmekọrịta nwoke na nwanyị. Na-enwe mmetụta n'ebe ụmụ nwoke nọ ma ọ na-akpasu ụmụ nwanyị iwe. 15 Mkparịta ụka ekwentị: enweghị omume nwoke na nwanyị. Mmekọrịta enyi na enyi. Jiri nwayọ na-emegide ndị mmadụ. Agụụ mmekọahụ amaghi.
Nwanyi 10 Afọ Ochie Ihe na mmekọahụ ndu. Uwe eji akwa. Enweghị enyi. Uslọ Akwụkwọ Ọjụjụ. Obi erughị ala. 28 Na-anabata mmekọahụ. Enweghị omume mmekọrịta nwoke na nwanyị. Ccessfulga nke ọma n'ụlọ akwụkwọ na n'etiti. 21 Ọrụ na-aga nke ọma. Onweghi mgbakwunye nwoke siri ike. Kama "nwoke" mana nabatara ụmụ nwanyị. Achọghị ịma banyere mmetụta uche.
Afọ Nwoke 10 Yiri uwe ụmụ nwanyị. Ọ chọrọ ịbụ nwa agbọghọ. Obi anaghị adị gị mma. Enweghị enyi. Enweghi ibu ụzọ. 17 Obi dị m ụtọ, na-emeta ndị enyi. N'ime egwuregwu. Enweghị omume mmekọrịta nwoke na nwanyị. Trafọdụ njirimara nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. 18 Ọ dị mma ugbu a. Uda akwukwo. Ọ bụghị ọtụtụ ndị enyi. Uwe ejiji na-emeghachi emegharị 3 afọ gara aga mana "kwụsịrị nke aka ya." Enweghị kọntaktị ọzọ.
Afọ Nwoke 10 Uwe eji akwa. Ebubata. Ihe ndị dị na nwoke. Obi anaghị adị gị mma. Enweghị enyi. 6 Charhapụ ịtụpụrụ ndụmọdụ ahụike. -- Enweghị kọntaktị ọzọ.
Afọ Nwoke 11 Uwe eji akwa. Ebubata. Achọghị njimara nwoke. Igbu onwe ya. Enweghị enyi. 22 Onweghi akwa obe ma na-apu n’iru. N'ime egwuregwu. Ga nke ọma n’ụlọ akwụkwọ. Obi adịghị ndị nne na nna mma. 19 Mmekọ nwoke na nwanyị n’agbata afọ 14 na 17. Obi anaghị adị gị ụtọ maka nke a. Agụrụ ọgwụ. "Hega na nwoke na nwoke ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị. Nnukwu ihe ịga nke ọma.
Afọ Nwoke 12 Uwe eji akwa. Ifiesmata ndi nwanyi. Nwoke idina nwoke? Dara mbà n'obi na igbu onwe ya. Enweghị enyi. Abalị 23 Enweghị akwa akwa. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị na ụmụntakịrị nwoke na nwanyị nwere ezi mmekọrịta. Ihe ịrịba ama nke agụụ mmekọahụ. 19 Enweghị akwa akwa. Jiri nwayọ rụpụta ihe. Heterosexual. Nwanne ka etinyere ụlọ ọgwụ mgbe ọ dị afọ 11. - Obi dara mba.
Ekele m dị n’aka ndị ọrụ Stubbs Terrace Hospital na nke ụlọ akwụkwọ praịmarị Graylands yana Dr Ross Kirkman, onye nyere aka na data ahụ. Enwere m obi ekele dị ukwuu na Dr Ann Whitehead na mbubreyo Dr William E. Robinson maka iji obiọma nye m ohere ịgakwuru ndị ọrịa ha, akụkọ banyere ụlọ ọgwụ na mkparịta ụka, yana ndị ezinụlọ na ndị na-eto eto tozuru oke iji nyere anyị aka,
1 Green R, Ego J. Prepubertal ụmụ nwoke na-ahụkarị nke na-egosi ihe ịrịba ama nke njirimara nwoke na nwanyị: afọ ise na-agbaso. Am J Orthopsychiatry 1964; 34: 365-366
2 Zuger B. Omume zuru oke nke dị na ụmụ nwoke site na nwata. I. Ọrịa ọrịa na ọmụmụ ihe ọmụmụ. J Pediatr 1966; 69: 1098-1107,
3 Lebovitz PS, Omume ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke: akụkụ nke nsonaazụ ya. Am J Isi mgbaka 1972; 128: 1283-1289.
4 Zuger B, Omume mara mma nke dị na ụmụ nwoke site na nwata: afọ iri ọzọ nke ntinye. Na-agụnye Ọrịa 1978; 19: 363-369.
5 Green R, Omume ndi nwoke na nwanyi na ndi nwoke na nwanyi. Am J Psychiatry 1979; 136: 106-108.
6 Bates JE, Skillbeck WM, Smith KVR, et al. Ntinye aka na ezinụlọ nke ụmụ nwoke na-enwe nsogbu. Am J Orthopsychiatry 1975; 45: 150-157.
7 Green R. Mmekọahụ gbasara mmekọahụ na ụmụaka na ndị okenye. New York: Akwụkwọ Akwụkwọ, 1974.
8 Green R. Atypical psychosexual mmepe. Na: Rutter M, Hersov L, eds. Psychimụaka mgbaka: ụzọ nke oge a. Oxford: Blackwell, 1976: 798-804.
9 Rekers GA, Lovaas 01. Omume omume diri omume ihie nwoke na nwa nwoke. J Appl Behav Anal 1974; 7: 173-190,
10 Rekers GA, Yates CE, Willis TJ, et al. Mgbanwe okike nwata na-agbanwe: onye na-achịkwa ihe gbasara mmekọahụ na arụ ọrụ na omume. J Behav Ther Exp Ọrịa 1976; 7: 51-57.
11 Rekers GA, Varni JW. Nhazi onwe nke omume nwoke na nwanyi: omume ikpe, J Behav Ther Exp Psychiatry 1977; 8: 427-432.
12 Stoller RJ, Nkọwa nwoke na nwoke: nsogbu ọgwụgwọ. JAm Psychoanal Assoc 1978; 26: 541-558.
13 Pruett KD, Dahl EK. Psychotherapy nke okike njirimara esemokwu na ụmụ okoro. JAm Acad Child Psychiatry 1982; 21: 65-70.
14 Zucker KJ. Achọpụtara ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Na: Steiner BW, ed. Dysphoria nke nwoke na nwanyị: mmepe, nyocha, njikwa. New York: Plenum Press, 1985: 75-174.
Americantù Na-ahụ Maka Ọrịa Uche nke America 15. Diagnostic na mgbakọ na mwepụ nke ọrịa uche (DSM III). 3rd edn. Washington, DC: APA, 1980.
16 Zucker KJ. Nsogbu ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị: nsogbu nyocha, J Am Acad chimụaka Uche 1982; 21: 274-280.
17 Machover K, Ngosipụta mmadụ na ịbịaru mmadụ. Springfield, III.: Charles C. Thomas. 1948.
18 Brown D. Mmasị inwe mmekọahụ na ụmụaka. Psychol Med [Monogr Suppl} 1956; 70 (14).
19 Hersov L, Bentovim A. Inpatient nkeji na ụlọ ọgwụ ụbọchị. Na: Rutter M, Hersov L, eds. Psychimụaka mgbaka: ụzọ nke oge a. Oxford: Blackwell, 1976: 880-900.
20 Ntughari RJ. Mmekọahụ na okike. New York: Jason Aronsen, 1968.
21 Freund K, LangevinR, Zajac Y. et al. Na Na Na Na Na Mmekọahụ nne na nna na ụmụ nwoke na nwoke na nwanyị na-abụghị nwoke na nwanyị. Br J Ọrịa 1974; 124: 22-23.
Nchịkọta 22 Yalom, Green R, Fisk N. Nkpughepụ nke ụmụ nwanyị na homonụ nwanyị: nsonaazụ na mmepe mmekọrịta nwoke na nwoke na ụmụ nwoke. Arch Gen Ọrịa 1973; 28: 554-561.
23 Gadpaille WJ. Ihe omumu banyere ndu nke nmekorita nwoke na nwanyi. Psychiatr Clin North Am 1980; 3: 3-20.
24 Zuger B. Ọrụ nke ihe ezinụlọ na-eme na-eme ka ụmụ nwoke na-akpa ike. Am J Psychiatry 1970;126: 1167-1179.
Princess Margaret Hospital maka Childrenmụaka,
Robert J. Kosky, FRANZCP, Onye isi, Ọrụ Ndị Isi; na Onye isi Ọchịchị, Childmụaka na Ọkpụkpụ Isi Ọrụ Uche, Ngalaba Ahụike Western Western.
Ntughari: Dr R.]. Kosky.
(Anata Dec. 9, 1986; nabatara Feb. 6, 1987)
Budata pdf nke edemede mbụ ebe a: -
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịgụ pdf mbụ. n’asụsụ gị biko gbakọọ pdf ahụ. Inwere ike jiri pdf na ntanetị. onye ntụgharị ịsụgharị pdf gaa n'asụsụ gị. Enwere ike ịbanye onye ntụgharị asụsụ ebe a: -